किताव पढ्नु, नाटक र सिनेमा हेर्नु उस्तै हो– "धनपती" नायक खगेन्द्र लामिछाने - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२२ असार,२०७४ | Forseenetwork
टलक जङ्ग भर्सेस टुल्के ,पशुपती प्रसाद जस्ता चर्चित सिनेमामा काम गरेर सिने नगरीमा स्थापीत नाम हो अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने । उनले आफू सिनेमाको हिरो भन्दा सिनेमा भित्रको एक सामान्य पात्रको रुपमा आफूलाई परिचय गराउँछन । फर्सीनेट वर्क संग खगेन्द्रले आफ्नो जीवनका तिता मिठा पलको बारेमा कुराकानी गरेका छन–
त्यसपछि नाटकलाई नै पेसा बनाए अनि सिनेकर्मी बने
गाउँबाट पढ्नलाई म स्याङ्जाबाट पोखरा आए । कलाकारिता तर्फ आउँछु भनेर कहिल्यै पनि सोचेको थिईन । यो कुरा पोखरा पढ्दा फेरी बल्ल मनमा पलाएको चिज हो । लेखनको शुरुवात भने मैले ४–५ लाईनको कविताबाट शुरु गरेको हो । कक्षा १२ को परिक्षापछि मेरो साथीहरुले क्षेत्रिय नाटक प्रतियोगितामा नाटक खेल्ने भनेर पास हालेर आएका रहेछन । नाटकमा एउटा कलाकार कमि भएछ । त्यसपछि एक जनाले मलाई तिमी खेल्छौ भनेर सोध्यो । मैले उसलाई आफूले नाटक अहिले सम्म नहेरेको र नाटकको बारेमा केही थाहा नभएको कुरा बताए । उनीहरुले म तिमीलाई सिकाउँ भने पछि म उनीहरु सग नाटक खेल्न गए । नाटकमा काम गर्दा रमाईलो अनुभव गरे । प्रतियोगितामा हाम्रो टिम दोस्रो भयो ।
पछि आफैलाई रमाईलो लाग्दै गएपछि यसलाई पेसा बनाउने सोच बनाए । यो क्षेत्रमा आएपछि फरक मान्छे संगको कुराकानी, भेटघाट, अन्तरक्रिया र चिनजान गर्न पाईन्छ । काममा पनि घुमफिर र रमाईलो गर्न पाईन्छ । त्यही चिजको कारण मलाई यो कामलाई पेसा बनाउने ईच्छा लागेको हो । त्यसपछि मैले अनुप दाईकोमा एक्टिङ्ग क्लासमा ट्रेनिङ्ग लिए । नाटक सिक्न म नाच घर पनि गए ।
मैले अनुप दाई सग नभेट्दै नाटकमा काम गर्न थालेको हो । त्यसक्रममा नाटकको स्क्रिप्ट लेखन तर्फ आफूलाई अगाडी बढाए । लेखन निर्देशन गर्ने हिसाबले बिचमा मैले बि.बि.सी. मा जागिर पनि खाए । नाटकमै जमेको मान्छे म आफूले सिनेमा खेलौला भनेर कहिल्यै सोचेको थिईन । काठमाडौ आएपछि मैले वधशालामा काम गर्न मौका पाए । मनोज पण्डितको निर्देशनमा बनेको सिनेमा मा खेल्दै गर्दा बनेका मेरा राम्रा साथी हुन दयाहाङ् राई र सौगात मल्ल । नाटक खेल्दा खेल्दै बनेको राम्रो साथी हुन । उनीहरु संग सिनेमामा काम गर्न पाईयो । अनुप दाई स्वयम पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो ।
हामीले सिनेमामा काम गर्दा जे सुन्ने गर्थ्यौ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो वातावरण मैले त्यहाँ भेटाए । त्यसपछि सिनेमामा काम गर्दा केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए । एउटा फिल्म खेल्ने बितिक्कै कसले फिल्म खेलाउँछ हैन (लामो हासो) त्यसपछि बिस्तारै आफैले बनाउन थाल्यौ । अहिले सम्म तिनवटा सिनेमा बनाए । टुल्केमा भने रविन्द्र,म, मेरो श्रीमती रोजिना, राम कुमार बानिया निर्माताको रुपमा आयौ । त्यसपछि खगेन्द्र लामिछानेको परिचय बद्लियो । नाटयकर्मीबाट बिस्तारै सिनेमा कर्मी र राईटर पनि भए ।
बुबा आमाको ऋण तिर्न काठमाडौँ आए
पशुपती प्रसादको पशुपती झै शहर आएको मान्छेले एउटा सपना बोकेर आएको हुन्छ । म पनि काठमाडौ नाटक खेल्छु र लेखक बन्छु भनेर आएको हो । तर, सपनाको साथै म माथी मेरो परिवारको जिम्मेवारी पनि थियो । मेरो बुबा आमाले मलाई हुर्काउन गरेको दुखको ऋण फिर्ता गर्नु थियो मलाई । मैले यहाँ आएर त्यो सबै कुरा पूरा गरेँ । मेरो सिनेमा रिलिज हुने बितिक्कै बुबा आमा जहिल्यै पोखरा आएर हुेर्नु हुन्छ । गाँउमा हाम्रो सुन्तला फर्म, गाई भैसी सबै छ । त्यहाँ सबै कुरा छोडेर हिड्न मिल्दैन । तर, पोखरा भने एक घण्टाको कुरा हो । त्यहाँ आएर उहाँहरु फस्र्ट डे फस्र्ट शो हेरेर घर जानुहुन्छ । पशुपती प्रसाद हेर्ना साथ बुबाले मलाई फोन गरेर,“फिल्म राम्रो लाग्यो । मन छोयो । म त रोए ।” भन्दै हुुनुहुन्थ्यो ।
म घरको एउटा मात्र छोरा भएको कारणले आमा बुबाले एकदमै माया गर्नु हुन्थ्यो । सामान्य परिवारमा हुर्के पनि मेरो सानो भन्दा सानो कुरा पनि पूरा हुन्थ्यो । किशोर अवस्थामा हुदाँ आफ्नो कुरा कसैले नसुनिदिएको जस्तो अनुभूती हुन्छ । त्यो कुरा शारीरिक र मानसिक विकासको कारणले भएको भन्ने कुरा पाको भएपछि थाहा हुन्छ । मेरो बुबाले जिवनमा मागेको हरेक कुरा पूरा गरिदिनु भएको छ । त्यही भएर मलाई ठूलो भएपछि बुबाको हरेक चिजको गुण बुवालाई तिर्नु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो । उहाँलाई मलाई प्रोफेसर बनाउने इच्छा थियो । त्यो सपना मैले पूरा गर्न पाईन । तर, म अहिले जे छु बुबा त्यसमा निकै खुशी हुनुहुन्छ । म रियल लाईफमा प्रोफेसर नभएपनि रिल लाईफमा भने प्रोफेसर बनेको छु (लामो हासोँ) । काठमाडौ आएर दुख गरेर मैले बुबाको एउटा भार कम गर्न बहिनीको पढाई खर्च आफै बेहोरेको थिए । बुबाको लागि केही गर्न सकिन भनेर चित्त दुखाएर बस्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना कहिल्यै भएन ।
किताव पढ्नु, नाटक हेर्नु, सिनेमा हेर्नु उस्तै हो
हामीले नेपाली सिनेमा हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सिनेमाको माध्यमबाट मनोरन्जन लिन र दिन सिक्नु पर्छ । आमा बुबाले छोराछोरीलाई सधै किताबी ज्ञान मात्र दिनुहुदैन । अभिभावकले छोरा छोरीलाई किताब पढ् भनेर किनरे ल्याएरै दिनुहुन्छ । त्यसमा सबै जना खुशी हुन्छन । किताब पढेर सन्तान निकै खुशी हुन्छन । तर, सिनेमाको केसमा अभिभावकले यो सिनेमा हेर भनेर कमै भन्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ एउटा किताब पढ्नु र सिनेमा हेर्नुमा धेरै अन्तर छ । कुन सिनेमा हेरेमा राम्रो कुन हेरेमा नराम्रो भन्ने कुरा आफैले ठ्म्याउनुपर्न कुरा हो । किताव पढ्नु, नाटक हेर्नु, सिनेमा हेर्नु भनेको लगभग उस्तै कुरा हो ।
कतिपय अवस्थामा मानिसले सिनेमाको पात्र र आफूलाई तुलना गरि रहेको हुन्छ । हामी सिनेमाको कथाबाट प्रेरित हुने गर्छौ । जिवनमा सिनेमा हेर्दै गर्दा तत्कालिन समयमा स्टोरीले धेरै ठाँउमा छोएको हुन्छ । सिनेमा हेर्न जादा म कस्तो प्रकारको सिनेमा हेर्न जादै छु भन्ने कुरा सोचेर पनि जानुपर्छ । हामीले सिनेमा हेर्दै नहेरी सिनेमालाई समिक्षा गर्न गर्छौ । तर, सिनेमा नहेरी समिक्षा गर्नु भन्दा सिनेमा हेरेर टिप्पणी गरेको राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ । हेरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । त्यही कारण राम्रो कुरा हेर्न गराँै । सिनेमा हेर्नु नराम्रो होईन । सिनेमा प्रति नकारात्मक धारण भएको कारणले आफ्नो सन्तानले हल सम्म सिनेमा हेर्न नजाओस भनेर आमा बुबाले सोच्नुहुन्न । त्यो भने गलत हो ।
हिरो हुनलाई शरीर भन्दा एक्टिङ्ग आवश्यक
मलाई सिनेमाको हिरो हुनलाई राम्रो शरीर, नाटक र डान्स मात्र हुनुपर्छे जस्तो लाग्दैन । अभिनेतामा सबै किसिमको गुण भए त त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । तर, त्यो सबै नभईकन सिनेमा बन्नै सक्दैन भन्ने चाहि छैन । मान्छेलाई रुप पनि चाहिएला तर कस्तो खाल्को सिनेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नेले पनि धेरैकुरा निर्धारण गर्छ । हलिउड र बलिउड सिनेमामा हाम्रो भन्दा अघि नै विकास भईसकेको छ । पहिले हामी भने सिनेमाको स्टोरी भन्दा सिनेमाका प्रमुख कलाकारलाई ध्यानमा राखेर सिनेमा हेर्न जाने गथ्र्यौ । यो एक किसिमको ट्रेन्ड नै बनेको थियो । तर, अहिले भने हामी सिनेमाको स्टोरी र क्वालिटी हेरेर सिनेमा हेर्ने गर्छौ ।
सेलिब्रेटी भएपछि आम जीवन जिउन पाईँदैन– खगेन्द्र लामिछाने
वास्तविक नाम भन्दा पनि चरित्रले चिनिने कलाकार हुन् खगेन्द्र लामिछाने । बधशाला, टलकजंग भर्सेज टुल्के, पशुपतिप्रसाद जस्ता सिनेमामा काम गर..
ट्रेन्डिङ ४ मा ‘धनपति’
रुपले होइन कलाले हिट भए यी अभिनेता
‘लव लव लव’ प्रदर्शनमा नआउदै निर्देशक खनाल ‘धनपति’ बनाउने चटारोमा ,‘पशुपतिप्रसाद’का खगेन्द्र ‘धनपति’ ।।
धनपतिमा नायिका पक्का, को बन्दैछिन् त खगेन्द्रको श्रीमती ?
पशुपति पछि धनपति बनाउँदै दिपेन्द्र र खगेन्द्र